Colaadaha Itoobiya oo Keenay In 35,000 Arday Ah Ay Isaga Tagaan Jaamacadaha & Israel oo Mamnuucday Safaradeedii Dalkaas. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
January 19, 2020 5:05 am by admin Views: 94
Wasaaradda Sayniska iyo Tacliinta Sare ee Itoobiya ayaa Jimcihii lasoo dhaafay xaqiijisay in rabshadaha ka jira 22 jaamacadood oo ku yaal dalkaas ay sababeen iney waxbarashada isaga tagaan 35,000 oo arday ah.
Wasaaradda ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin ay ugu yeertay kuwa edbin ah kana dhan ah boqollaal kulliyadood iyo arday lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen rabshadaha ka jira xarumaha waxbarashada sare ee ku yaal dalkaas.
Intaa waxay ku dartay iney tallaab ka qaaday 640 arday iyo 40 macallin iyadoo ka gaabsatay iney faahfaahiso nooca ay u ciqaabeyso waxaana siyaasiyiin dibad joog ah ay barahooda Internerka ku shaaciyeen in dadka la cadaadinayo ay u badan yihiin kuwa kasoo jeeda qowmiyadaha Muslimiinta.
Waxay kaloo wasaaradu sheegtay iney sameysan guddi ka hor taga rabshadaha soo laalaabanaya, inkastoo aysan fududeyn soo celinta 35,000 oo ardayda jaamacadaha ah oo waxbarashadoodii isaga tagay.
Dagaallada qowmiyadeed ee goos gooska ah ee ka dhaca jaamacadaha kala duwan ee dalka Itoobiya, tan iyo bishii Nofembar ee la soo dhaafay waxaa ku dhintay daraasiin dad ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo lamid ah amaba ka badan.
Qalalaasahan ayaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambeya. Ra’iisul Wasaaraha dalkaas Abiy Axmad ayaa wuxuu sheegay iney xukuumaddiisu xeri doonto dhammaan jaamacadaha dalka haddii xaaladdu sidan kusii socoto.
Sanadihii la soo dhaafay, macaahidda tacliinta sare ee Itoobiya waxay ku caan baxeen rabshado isdaba joog ah oo ka dhex dhaca ardayda taas oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaha qowmiyadeed iyo diinta.
Dhinacooda, “Yahuuda” waxay muwaadiniinteeda iyo macallimiinteeda ka hawl gala Itoobiya ku sameysay is hor taag ah iney u safraan dalkaas kadib warbixin dhowaan la soo saaray oo dhanka amniga ah oo ku saabsan “khatar ka imaan karta” qaaradda Afrika, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah.
Wasaaradda waxbarashada Yahuuda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay: “Ka dib digniinaha ku saabsan safarka Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Israel ay ku tageyso Afrika, waxay Wasaaraddu go’aansatay inay joojiso in Itoobiya loo diro muwaadiniin marxaladdan.”
Dhammaan duullimaadyadii Yahuuda ee loo qorsheeyay sannadkan inay ku tagto Addis Ababa, caasimadda Itoobiya, waa la hakiyey.
Waxaa la sheegay in bishii Agoosto 2018, maydka gabar 21 jir ah oo Yahuudiyad ah laga helay saxaraha Itoobiya. Wasaaradda arrimaha dibedda ee Yahuuda ayaa markii dambe sheegtay in ardayadda la dilay xilli ay dalxiis ku jirtay.
Xafiiska la-dagaallanka (waxa loogu yeero) argagixisannimada ee Israa’iil ayaa dhawaan sheegay inay jirto “khatar ah bartilmaameedka Yuhuudda ku nool xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya”, isagoo ka digaya in weeraradu ay kusii fidi karaan Itoobiya. Yahuudu waxay farta ku fiiqday fashilka amniga Itoobiya ee bishii Abriil 2019 sababo la xiriira dhowr weerar oo ka dhacay daafaha dalka, sida lagu sheegay mareegta Bariga Dhexe Monitor.
Si kastaba ha noqotee, amniga Israel wuxuu muujiyey “suurtagalnimada” jiritaanka unugyo xiriir la leh Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Israel iyo Itoobiya waxay leeyihiin xiriir adag, waxayna labaduba ka shaqeynayaan sugida soogalootiga Yuhuuda Falashmura si ay u dejiyaan dhulka ay qabsadeen Falastiin.
Hal sano gudaheed, Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay fuliyeen hawlgallo 3 ah oo abaabulan islamarkaana waaweyn, cinwaanna looga dhigay “Qudus lama yahuudeynayo” taasoo dhalisay khasaare ballaaran oo bashar iyo maadiba isugu jira oo Mareykanka iyo xulafadooda, oo ay ku jiraan Israelis ama Yahuuda, waxaana loo arkaa inay tahay jawaabta ugu daran ee ka dhanka ah go’aanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa in Qudus uu u aqoonsan yahay caasimadda Yahuuda.